Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Sami Khedira Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye amara aha ya; "Sami". Nwa anyi Khedira Sami anyi Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-agba egwu nke ọma. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole na-ama ọtụtụ ihe banyere Sami Khedira's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Sami Khedira Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ mbido
Sami Khedira mụrụ na 4th ụbọchị nke April 1987 na Stuttgart, Germany. A mụrụ nne ya German, bụ Doris Khedira, na nne ya nke Germany, bụ Laishar Khedira nke si Hammamet, obodo dị na Tunisia, mụrụ ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya mara mma.
Echiche bụ na a ga-amụ Sami ma malite mgbe mama mama Doris mere ezumike na North Africa. Mgbe ya na obodo ezumike nke Hammamet, ọ zutere Lazhar Khedira onye ọ kọwara dịka ịhụnanya ya. Lazhar dị na iri abụọ na iri ya n'oge ahụ. Ịhụnanya ha nọgidere na-aga n'ihu mgbe ọ gara Germany. Iji zere mmekọrịta dị anya, ma ndị hụrụ ya n'anya nọgidere na-eleta ibe ha, na-agagharị n'etiti Germany na Tunisia.
Otu ụbọchị, visa nna papa ya nwụrụ mgbe ọ nọ na Germany. N'elu njedebe visa ya, ọ jụrụ ịhapụ mba ahụ, kama ịchọrọ ịmanye aka ya ma kee eriri ndị ahụ na Dorris. Na Sami Khedira a maara ụwa nke taa taa afọ ole na ole mgbe e mesịrị.
Sami toro na Stuttgart ya na ụmụnne ya abụọ ndị nwere mmasị dị iche na nhọrọ ha. Rani, nke na-eto eto na-agbaso nzọụkwụ nwanne ya nwoke (Sami) ka ọ bụrụ ndị na-agba ọsọ mgbe Denny na-etinye uche na agụmakwụkwọ ebe ọ ghọrọ ọkachamara agụmakwụkwọ. Foto dị n'okpuru ebe a bụ nwa agbọghọ Sami na ụmụnne ya nwoke abụọ, Rani n'aka nri na Denny n'aka ekpe.
N'ịbụ ndị tolitere, nne na nna ha mere ụkpụrụ ha karịsịa banyere otú ha ga-esi na-akwanyere ndị okenye ùgwù. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ndị ezinụlọ Sami jiri izu ise na Tunisia n'oge okpomọkụ ọ bụla. Ọ dị mkpa iburu n'uche na mbụ Sami na football sitere na ememe ya na Tunisia.
Sami Khedira Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Bilie na-ewu ewu
Khedira kwadoro nkà egwuregwu football ya na osimiri ndị dị na Tunisia mgbe ọ ga-aga ezumike ebe ahụ dịka nwata. Nke a mere ka ọ bụrụ onye dike obodo n'ógbè nna ya nke Africa. N'ịlaghachi na Germany, Sami ga-egosipụta nkà ọ mụtara n'Africa na ụmụntakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ya.
Mgbe ọ bụ 8 na afọ 1995, nna ya kpebiri ikwe ka ọ sonyere òtù ndị ntorobịa Stuttgart. Egwuregwu na ụlọ egwuregwu Germany akwụsịghị Sami ka ọ laghachi na Morocco iji soro ndị ọgbọ ya rụọ ọrụ n'ubi ha. Ugbo ala ha na Tunisia mgbe ufodu ndi ozo na-ese n'elu osisi.
Nta ahu: Ọrụ Sami bịara na njedebe mgbe ọ bụ 17. Ọ nwere nnukwu nsogbu ikpere nke mere ka ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị inwe olileanya na football. Ọ nọ n'oké ihe mgbu na ndị dọkịta gwara ya ozugbo na ọ bụ nhụjuanya ya adịghị mma maka ịkwado ọrụ ya. Sami gbara ọsọ ọsọ ruo ọnwa ole na ole na-agbanyeghị na ọ naghị enwe nchekasị, na-enye ya ekele maka nkwado ezinụlọ.
N'ịlaghachi azụ, nke a ghọrọ mmalite mbụ ya iji ghọọ okenye. Mgbe ọrụ nke abụọ gasịrị n'ụkwụ ya, enwere olile anya dị ka oge ahụ ọ chere na ọ kwụsịrị inyefe ya.
Ọ laghachiri ka ya na òtù VfB Stuttgart na-aga n'ihu na-agba bọlbụ ebe ya na ndị otu na-akpakọrịta Mario Gomez iji merie aha Bundesliga na 2007.
Ebube we bia mgbe Sami meriri German n'okpuru 21 nke meriri 2009 European Championship, na-eti England 4-0 n'ikpeazu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Sami Khedira Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
N'azụ German ndị na-aga nke ọma, e nwere ndị na-abịa na-ezuru obi ya. Sami Khedira bụ onye mbụ mara mmekọrịta ya na ezigbo ihe nlereanya German bụ Lena Gercke.
Ha abụọ abụrụ otu ụzọ site na May nke 2011 ma gosipụta ọnụ na mkpuchi nke Magazin GQ. Iwere oge ịme foto ahụ dị mma bụ otú ha si eme ka mmekọrịta ha na ọha, wee mee ka ndị nta akụkọ kpọọ ha dịka German Beckhams.
Dabere na Na-eso Real Madrid, Nwa agbọghọ nta Khedira ghọrọ onye a ma ama naanị afọ 18 mgbe ọ meriri oge mbụ nke ihe atụ kachasị elu nke Germany. Mgbe ihe nkiri ahụ gasịrị, ọ na-abụkarị ihe ngosi ya ruo mgbe ọ malitere ịlụ Khedira.
Na 2012, di na nwunye ahụ gbaa akwụkwọ. Sami Khedira na Lena Gercke dị ka ndị nzuzu na njikọ ha na-ejupụta na Bild na akwụkwọ akụkọ tabloid ndị ọzọ
Kwa afọ, ha na-enwu gbaa n'akụkụ ibe ha. Enweghị ihe ọ bụla nke nsogbu maka ihe nlereanya na onye na-eme ihe nkiri, rue mgbe May 2015 mgbe obi dara Sami.
Dị ka akwụkwọ akụkọ German tabloid Bild si kwuo, atụmatụ ha dị iche iche maka ọdịnihu bụ ihe kpatara nkewa. Khedira, dị ka n'oge ahụ si Real Madrid si na Juventus kwaga ma chọọ ka ya na Lena nwee ezinụlọ. N'aka nke ọzọ, Lena adịghị njikere maka ịkwụsịtụ oge ọrụ ya. E kwuwerị, ọ chọrọ ịgbaso nzọụkwụ nke nlereanya ya Heidi Klum ma enweghi ohere maka ime ime na ndi na-agbanwe agbanwe. Ndị enyi abụọ ahụ kewara ekewa ma nọgide na-abụ ezi ndị enyi.
Mmekọrịta na Stefanie Giesinger (2015) - Ihe ọzọ Sami na-aga mgbe nkwụsị ahụ gachara maka ihe nlereanya German ọzọ. N'oge na-adịghị anya, ọ hụrụ na Turin dị mma Stefanie Giesinger na December 2015. Nke a mere ka ha nwee mkparịta ụka ha na-akpa.
Stefanie bụ igwe gwuru Juve na-elekwasị anya ka ọ na-ele nwoke ya ka ọ na-egwu bọl. Na 2016, o kwusiri mmekọrịta ya na Sami mgbe Sami malitere ịpụ na Adriana Lime bụ onye ọ hụrụ dịka onye zuru okè iji nyere ya aka ịkwụsị ya na Euro 2016. N'okpuru ebe a bụ Sami na Brazil Brazil bombshell Adriana Lima.
Ebe ọ bụ na mgbe mmekọrịta nke Sami na Adriana Lima malitere, ntakịrị ntakịrị ka a hụrụ ma ọ bụ nụ banyere mmekọrịta ya na ndị inyom ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị Fans na-atụ aro na ọ dị ezigbo mma na ya.
Sami Khedira Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ Ezinụlọ
dị nnọọ ka İlkay Gündoğan na Mesut Ozil, Ezigbo ezinụlọ a na-akwanyere ùgwù na German ruo German football. N'okpuru ebe a bụ nna ya na ụmụ ya abụọ na-egwu egwuregwu.
Tunisia mgbe ahụ bụ mba dara ogbenye dịka Dorris hụrụ n'anya, ọ bụ ihe mere Lazhar Khedira ji hapụ obodo ahụ maka Germany. Banyere ezinụlọ nna ya, Sami kwuru otu oge;
"Papa m nwere ụmụnne asatọ na ndị ezinụlọ ya nile bi n'otu obere ụlọ. Papa m aghaghị ịga akwụkwọ mgbe ọ dị afọ iri ma malite ozugbo inweta ego. "
Laa azụ na Tunisia, ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ndị Sami nile bi n'ebe ahụ. Nne nne ya na nna nna m bi n'ebe ahụ nakwa nne na nna asaa. Sami enwekwaghị ọnụ ọgụgụ nke Cousins ​​o nwetara. Akụkọ na-egosi na o nwere ụmụ nwanne nne 40 gbasaa gburugburu ụwa.
Hammamet dị na Tunisia enwetawo nnukwu mmelite site na njem. N'ịghọta nna nna ya, Sami kwuru ...
'Hammamet maka m bụ ebe mara mma maka ezumike. Enwere m mmasị ịga ebe ahụ ma leta ndị ezinụlọ m. Enwere m mmasị ịdọrọ ike n'akụkụ osimiri ma wepụ ihe m na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụ ebe zuru oke maka ịlaghachi, ebe m nwere ike ịnọ n'ụlọ. '
Nwanna: Sami toro na stuttgart na-egwu egwu na nwanne ya nwoke nke nta Rani Khedira n'oge ha bụ nwata. N'ịgbaso nzọụkwụ nwanne ya nwoke, Rani bụzi ndị ọkachamara na-agba egwu na ugbu a na-egwu FC Augsburg.
N'ihi nna ya nke Tunisia, Rani ruru eru ịrụ Tunisia. Otú ọ dị, ọ jụrụ arịrịọ ndị ọ ga-egwu maka otu mba si Tunisian FA.
Mgbe Sami na Rani na-agbanye n'egwuregwu football, nwa nwanne ha nwoke bụ Denny Khedira bụ onye ọkà mmụta mmụta nke gụrụ akwụkwọ nlekọta egwuregwu ka o wee nwee ike itinye ihe omuma iji jikwa ọrụ nke ụmụnne ya.
Denny na-enye onyinye maka "Onye nke kachasị agụmakwụkwọ ka mma" na Ngalaba Egwuregwu site na Mahadum Hohenheim dị n'obodo ya, Stuttgart, Germany.
Sami Khedira Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ nke Onye
Ebe kachasị amasị Sami bụ Audi Q7.
Sami Khedira adịghị achọ ọrụ arụ ọrụ, igbu oge, ọrụ nke na-ejighị talent. Ọrụ na-adịghị arụ ọrụ bụ ihe kpatara o ji hapụ Real Madrid na Juventus.
Ịdị adị nke Sami banyere ndụ na ọrụ na-egosi mgbe niile ihe siri ike na ọgba aghara.
Khedira hụrụ Hammamet n'anya ma ọ dịghị eche ya n'ụlọ. Ọ na-enwekwu mmetụta n'ụlọ na Germany. N'okwu ya ...
'Ọ bụ ezie na Hammamet abụghị ebe obibi m, ọ bụ obodo nke nna m ka ọ dịkwa mkpa maka m.'
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Sami Khedira Childhood Akụkọ nke ọma na eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọchị edoziri: July 24, 2018